CRYPTOCURRENCIES - Iseluleko sokuqala nokutshalwa kwezimali
I-cryptocurrency yimali edijithali ehlose ukwenza ukuthengiselana, ngenkathi izikhulula kubantu besithathu abathembekile njengamabhange ngokwesibonelo. Lawa ma-cryptocurrensets angabe esathengwa, athengiswe noma ashintshaniswe kuzingxenyekazi ezikhethekile njenge Binance noma i-Coinbase.
Thenga ama-Cryptocurrensets ku-Coinbase Thenga ama-Cryptocurrensets ku- Binance
Ama-cryptocurrensets angaphezu kwama-5000 ongawathola
Imali yedijithali ehamba phambili emhlabeni, i- I-Bitcoin (i-BTC) igcinwa futhi ithengiswe ngokuphepha nge-inthanethi kusetshenziswa incwadi yedijithali ebizwa nge-blockchain. Ngo-Okthoba 31, 2008, uSatoshi Nakamoto (mbumbulu) uchaza ukuthi imali yedijithali isebenza kanjani. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva, kwenziwa ibhulokhi yokuqala kwirejista yedijithali futhi kwenziwa ukuthengiselana kokuqala. I-Bitcoin bese ibiza u- $ 0,0007.
Igama elithi Ethereum (ETH) liyi-cryptocurrency ehlanganiswe nepulatifomu ye-computing esezingeni eliphansi. Abathuthukisi bangasebenzisa ipulatifomu ukwakha izinhlelo ezisetshenzisiwe futhi bakhiphe izimpahla ezintsha ze-crypto ezifanelekela njengamathokheni e-Ethereum.
Isimo semvelo Binance
Thola amanye ama-cryptocurrensets ku-ecosystem Binance futhi Binance SmartChain. Ngaphandle kokuphatha ukuhwebelana kwemali okuhamba phambili emhlabeni jikelele Binance isebenzisa yonke imvelo. I-BNB iyimpahla yendabuko ye- Binance Chain. I-BNB inezindlela eziningi zokusetshenziswa futhi ibhebhethekisa imvelo Binance njengophethiloli oyisisekelo. I-BNB yondla i-ecosystem Binance. Njengemali yomdabu ye- Binance I-Chain, i-BNB inokusetshenziswa okuningi: ukukhulisa ukuthengiselana kwamaketanga, ukukhokha imali yokuthengiselana ekushintshaneni Binance, yenza izinkokhelo ezisesitolo, nokuningi.
Imibuzo ephindayo ehlobene ne-Cryptocurrency
Thola yonke i-jargon yezobuchwepheshe ye-Cryptocurrency ne-Blockchain.
I-Altcoin iyi-cryptocurrency ehlukile kune-bitcoin.
IBlockchain ubuchwepheshe obudluliselwe kwezinye izindawo obusebenza ngaphandle kwegunya eliphakathi ngenxa yabasebenzisi bohlelo. Ivumela ukugcinwa nokusatshalaliswa kolwazi ngendlela ephephe kakhulu futhi engabizi kakhulu. Endabeni ye-blockchain yomphakathi, wonke umuntu ukhululekile ukuxhumana ne-blockchain futhi aqinisekise ukuthengiselana kwayo. Singachaza i-blockchain yomphakathi njengerejista yokubalwa kwezimali yomphakathi, engaziwa futhi engaphepheki.